version 0.2.3 – နယူးထိန်းချုပ်စ​​င်တာ
ဇွန်လ 3, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု7comments
Transposh plugin ကိုယနေ့ရဲ့လွှတ်ပေးရေး plugin ကိုအဘို့အသစ်တစ်ခု control panel ကိုလည်းပါဝင်သည်. ယခုအသစ် control panel ကို plugin ကို သာ. ကောင်း၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်စာရင်းဇယားကမ်းလှမ်း. ဒါ့အပြင်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာ default ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်တစ် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်း. ဤသူသည်သင်တို့တစ်ခုထက် ပို. ဘာသာစကားမှာသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရေးသားနေသောအမှုကောင်းမွန်သည်, သို့မဟုတ်သင့်စာဖတ်သူတွေကိုဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်မှတ်ချက်များထားခဲ့. ကျွန်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Db0 ဒီအ feature အသစ်အကြံပြုခြင်းများအတွက်.
ဒီအလွှတ်ပေးရေး၏တိုးတက်လာသောအသုံးဝင်မှုရှိစေရန် features တွေတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်မှုစာမျက်နှာယခု features အသစ်အကြံပြုဖို့ link တစ်ခုပါဝင်သည်ကြောင်း (သို့မဟုတ်အားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့ရန်) ဒါကြောင့်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ!
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin